ရာသီအစမှာတင် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကြပ်တွေ ရင်ဆိုင်သွားရမယ့် အာဆင်နယ်အသင်း
၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များ ထွက်ပေါ်
14 Jun 2018 . 4:05 PM
လာမယ့် ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီမှာ အသုံးပြုမယ့် အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရာသီအစမှာတင် အသင်းကြီး အချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမယ့် ပွဲစဉ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ် (၁၁)ရက်နေ့မှာ စတင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ (၁၂)ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီအဖွင့် ပွဲစဉ်မှာတင် အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းတို့ တွေ့ဆုံနေပြီး အီမရိတ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြသစ် အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery ရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရာသီအစမှာတင် ပွဲကျပ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ် (၁)အပြီးမှာတော့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကွင်းမှာ လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီအဖွင့် ပွဲစဉ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီး မန်ယူအသင်းက လက်စတာအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းက နယူးကာဆယ်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း စိန့်ဂျိမ်းစ်ပါ့ခ်ကွင်းမှာ သွားရောက် ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းသစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဝှိုက်ဟတ်လိန်းကွင်း ဖွင့်ပွဲအဖြစ် ပွဲစဉ် (၂)မှာ တန်းတက် ဖူလ်ဟမ်အသင်းကို လက်ခံ ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ရဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ ရာသီအဖွင့် ပွဲစဉ်အဖြစ် အိမ်ကွင်း အန်ဖီးလ်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကို လက်ခံ ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ဘောလုံးရာသီရဲ့ မန်ချက်စတာ ဒါဘီပွဲစဉ်ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ၊ (၁၀)ရက်နေ့မှာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ အီးတီးဟတ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့မှာတော့ မာဆေးလ်ဆိုက်ဒ်ဒါဘီ ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ အဲဗာတန်အသင်းတို့ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီး အီမရိတ်ကွင်းမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ စပါးအသင်းတို့ရဲ့ လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်ကို ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီ Link မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Photo:The Sun, Sky Sports
၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ အင်ျဂလနျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျမြား ထှကျပျေါ
လာမယျ့ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီမှာ အသုံးပွုမယျ့ အင်ျဂလနျပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ ပှဲစဉျမြား ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျတှကေို တရားဝငျ ထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈပွီး ရာသီအစမှာတငျ အသငျးကွီး အခငျြးခငျြး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မယျ့ ပှဲစဉျတှေ ပါဝငျနပေါတယျ။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျပှဲကို ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ သွဂုတျ (၁၁)ရကျနမှေ့ာ စတငျသှားမှာဖွဈပွီး ၂၀၁၉ခုနှဈ၊ မလေ (၁၂)ရကျနမှေ့ာ အဆုံးသတျမှာဖွဈပါတယျ။ ရာသီအဖှငျ့ ပှဲစဉျမှာတငျ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးတို့ တှဆေုံ့နပွေီး အီမရိတျကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျကစားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ နညျးပွသဈ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery ရဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ရာသီအစမှာတငျ ပှဲကပျြတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီး လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျ (၁)အပွီးမှာတော့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ စတနျးဖို့ဒျဘရဈချြကှငျးမှာ လနျဒနျဒါဘီပှဲစဉျကို ယှဉျပွိုငျကစားသှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ရာသီအဖှငျ့ ပှဲစဉျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျထိပျသီး မနျယူအသငျးက လကျစတာအသငျးကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံကစားသှားရမှာဖွဈပွီး စပါးအသငျးက နယူးကာဆယျအသငျးရဲ့ အိမျကှငျး စိနျ့ဂြိမျးဈပါ့ချကှငျးမှာ သှားရောကျ ကစားရမှာဖွဈပါတယျ။ စပါးအသငျးရဲ့ ကှငျးသဈကွီးဖွဈတဲ့ ဝှိုကျဟတျလိနျးကှငျး ဖှငျ့ပှဲအဖွဈ ပှဲစဉျ (၂)မှာ တနျးတကျ ဖူလျဟမျအသငျးကို လကျခံ ကစားသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျလုပှဲအထိ တကျရောကျနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ရဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးကတော့ ရာသီအဖှငျ့ ပှဲစဉျအဖွဈ အိမျကှငျး အနျဖီးလျမှာ ဝကျဈဟမျးအသငျးကို လကျခံ ကစားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ ဘောလုံးရာသီရဲ့ မနျခကျြစတာ ဒါဘီပှဲစဉျကိုတော့ နိုဝငျဘာလ၊ (၁၀)ရကျနမှေ့ာ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ အီးတီးဟတျကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျ ကစားသှားကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၁)ရကျနမှေ့ာတော့ မာဆေးလျဆိုကျဒျဒါဘီ ပွိုငျဘကျတှဖွေဈတဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ အဲဗာတနျအသငျးတို့ အနျဖီးလျကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျကစားသှားမှာဖွဈပွီး အီမရိတျကှငျးမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ စပါးအသငျးတို့ရဲ့ လနျဒနျဒါဘီပှဲစဉျကို ကစားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ အပွညျ့အစုံကိုတော့ ဒီ Link မှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
by Ko Kyue . 47 mins ago